Conda, PIP iyo NPM: Nidaamyada Maareynta Xirmooyinka Xirmooyinka Iskuduwaha | Laga soo bilaabo Linux
Sidaan horeyba u ognahay, badan ama dhammaantood Linuxeros khibrad leh, naga Nidaamka Howlgalka GNU / Linux badanaa waxay leeyihiin noocyo badan oo kaladuwan walboo curiya oo sameeya. Sidaa darteed, waxaan ku raaxeysan karnaa a Qaybinta leh hal ama in ka badan Degaan desktop, Maareeyayaasha Daaqadaha, Maareeyayaasha Kabaha, Maareeyayaasha Soo-galista, Adeegyada Sawirka iyo waxyaabo kale, sida, "Maamulayaasha xirmooyinka", oo ay ka mid yihiin kuwo si fiican loo yaqaan "Apt-hel" iyo kuwa kale oo aan si fiican loo aqoon, sida "Conda".
Haa "Maamulayaasha xirmooyinka", nidaamyadaas oo aan ka badnayn ururinta aaladaha u adeega otomatik howsha rakibaadda, cusbooneysiinta, qaabeynta iyo ka saarista xirmooyinka barnaamijka softiweer ee nidaamyadayada hawlgalka ee bilaashka ah iyo kuwa furan. In kastoo, qaar iyaga ka mid ahi sida caadiga ah ku yimaadaan qaab isku dheelitiran, taas oo ah, lahaansho iyo xirnaansho Nidaamyada Howlgalka, sida Windows y MacOS.
Guix: Tababarka Rakibaadda Qalabka Maareynta Xirmada
Sidaa darteed, u dhexeeya "Maamulayaasha xirmooyinka", si fiican loo yaqaan oo loo isticmaalo, waan xusi karnaa ku habboon-hel, karti, ku habboon, pacman, yum, iyo kuwo kale, in kastoo kuwani ay yihiin oo keliya hal madaltaasi waa in la yiraahdo GNU / Linux. In kasta oo, sidoo kale uu jiro mid loo yaqaan Guix, taas oo sida caadiga ah aan aad loo aqoon, tan iyo, guud ahaan, waxay ku timaadaa oo keliya mid isku dhafan iyo mid iska caadi ah, ee GNU Distro isku magac ah. Oo aan kaga hadalnay qoraal hore, kaas oo aan kugula talineyno inaad aqriso kadib markaan dhammeeyo daabacaadan.
"Guix oo ah maamule xirmo ayaa ku qoran luuqada 'Guile Scheme language' waxayna ku saleysan tahay maareeyaha baakadka Nix. Iyo sida loo qaybiyo GNU waxay ka kooban tahay oo keliya qaybo bilaash ah waxayna la socotaa kernel-ka GNU Linux-Libre, oo laga nadiifiyey walxaha qalabka laba-geesoodka ah ee bilaashka ah."
Noocii ugu horreeyay ee xasilloon ee Guix 1.0 ayaa la sii daayay oo kuwanu waa warkiisa
1 Conda, PIP iyo NPM: 3 Nidaamyada Maareynta Xirmooyinka
1.1 Waa maxay Conda?
1.1.1 Wax badan oo ku saabsan Conda
1.2 Waa maxay PIP?
1.2.1 Wax badan oo ku saabsan Pip
1.3 Waa maxay NPM?
1.3.1 Wax badan oo ku saabsan NPM
Conda, PIP iyo NPM: 3 Nidaamyada Maareynta Xirmooyinka
Waa maxay Conda?
Sidaad sheegtay degel rasmi ah, "Conda" es:
Wax badan oo ku saabsan Conda
"Conda" ayaa aad u wanaagsan dukumiintiyada rasmiga ah, in kastoo ay kaliya soo gasho ingiriisi. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay bulsho aad u fiican oo khadka tooska ah loo yaqaan «Conda-been abuur», kaas oo bixiya dukumiinti aad u fiican iyo Xirmooyinka Conda noocyo badan oo software ah. Ugu dambayntiina, isaga ayaa ku jira Websaydhka GitHub Macluumaad badan oo qiimo badan ayaa laga heli karaa, soo degsiin, rakibid iyo adeegsi.
Sidaad sheegtay degel rasmi ah, «BILAASH» es:
“Hadda waa qalabka lagula taliyay PyPA ee rakibidda xirmooyinka Python. Sidaa awgeed, PIP hadda waa rakibayaasha xirmooyinka la doorbido ee Python, mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee rakibidda xirmooyinka Python, sidaas awgeedna waa kan ku rarta noocyo casri ah Python. Intaa waxaa sii dheer, waxay siisaa astaamaha lagama maarmaanka u ah helitaanka, soo dejinta, iyo rakibidda xirmooyinka laga helo PyPI iyo tusmooyinka xirmooyinka kale ee Python, waxaana lagu dari karaa howlo ballaadhan oo shaqo oo horumarineed iyada oo loo marayo isku xidhka khadka amarka (CLI). Iyo sababta oo ah waa il furan iyo iskutallaab, waa loo isticmaali karaa dhib la'aan sidoo kale Windows iyo MacOS."
Wax badan oo ku saabsan Pip
«BILAASH» sidoo kale wuxuu leeyahay wax aad u wanaagsan dukumiintiyada rasmiga ah, in kastoo ay kaliya soo gasho ingiriisi. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay bulshada khadka tooska ah ee internetka «Python», kaas oo bixiya heer sare dukumeentiyo. Ugu dambayntiina, isaga ayaa ku jira Websaydhka GitHub Macluumaad badan oo qiimo badan ayaa laga heli karaa, soo degsiin, rakibid iyo adeegsi.
Waa maxay NPM?
Sidaad sheegtay degel rasmi ah, "NPM" es:
"Waa maamule xirmo fudud oo loogu talagalay NodeJS, kaas oo fududeeya la shaqeynta, maaddaama ay kuu saamaxayso inaad maareyn karto maktabad kasta oo la heli karo waqti gaaban oo leh hal koodh koodh ah, sidaas awgeedna gacan ka geysaneysa maaraynta qaybaha, u qaybinta xirmooyinka iyo ku darida ku tiirsanaanta qaab fudud . "
Wax badan oo ku saabsan NPM
"NPM" sidoo kale waxay leedahay wax fiican dukumiintiyada rasmiga ah, inkasta oo ay waliba soo gasho oo keliya ingiriisi. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay bulshada khadka tooska ah ee internetka «Node.JS», kaas oo bixiya heer sare dukumeentiyo, qaarkood waxay ku yimaadaan Isbaanish. Ugu dambayntiina, isaga ayaa ku jira Websaydhka GitHub Macluumaad badan oo qiimo badan ayaa laga heli karaa, soo degsiin, rakibid iyo adeegsi.
Ugu dambeyntii, waa muhiim kudar «NPM» soo socda:
Intaas waxaa sii dheer, ka ahaanshaha ilo furan iyo iskutallaab, waxaa loo isticmaali karaa dhibaato la'aan sidoo kale laga soo Windows y MacOS.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Conda, PIP y NPM», kuwaas oo ah 3 nidaamyada maaraynta xirmooyinka iskutallaabta iyo ilo furan, si fiican loo yaqaan oo ay adeegsadaan inta badan isticmaalayaasha horumarsan iyo kuwa horumariya; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Conda, PIP iyo NPM: Nidaamyada Maareynta Xirmooyinka ee iskutallaabta